Global Voices teny Malagasy » “Ny herisetra no tsirinkevitra hiadiankevitra” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jona 2018 5:31 GMT 1	 · Mpanoratra Apawki Castro Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Ekoatora, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teratany, NewsFrames
Apawki Castro no filoha voafidy ho an'ny fifandraisana ao amin'ny Konfederasion'ny Zom-pirenena Tompotany ao Ekoadaoro (CONAIE)  tamin'ny fe-potoana 2017-2020.
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra 697 nivoaka tanelanelan'ny Mey 2016 ka hatramin'ny Jiona 2017 hita nanonona “shuar” ao anatin'ny angona Media Cloud 4 amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo amin'ny sary lehibe kokoa ).
Etsy andaniny, niezaka nanaratsy ireo rahalahinay sy rahavavinay Shuar ny fahefan'ny haino aman-jery rehetra avy amin'ny Fanjakana, miezaka mampiseho azy ireo ho olon-dia, mahery setra sy mitanjaka. Manomboka amin'ny fomba fihevitra mpanjanatany, niezaka ny fanjakana mba hametraka ny hevitra fa ny zom-pirenena Shuar no meloka tamin'ny fitarihana herisetra nitranga tamin'ny Desambra 2016 . Tamin'izany, niezaka nanome tsiny ny vahoaka Shuar ny fanjakana noho ny ady rehetra nitranga tao amin'ny tobin'i Esperanza ao Nankints.
Ao anatin'ny andiana Rising Frames novolavolaina tao anatin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ny vondrom-piarahamonina tompotany ao Sarayaku sy ny zom-pirenena Shuar ity, izay samy miorina ao amin'ny faritra Amazonina Ekoadaoreana. Ny vahoaka Sarayaku sy Shuar dia nanatontosa tolona naharitra ela teo amin'ny sehatra nasionaly  sy iraisam-pirenena mba hampitsahatra ny tetikasa fitrandrahana ao amin'ny faritanin'izy ireo, ary anisan'ny zava-dehibe tamin'ity tolona ity ny fandefasan-kafatry ny olona . Nangataka tamin'ireo mpikambana izahay mba hamaly ny fanadihadian'ny haino aman-jery voalohany indrindra izay milaza ny fomba fisehoan'ireo lohahevitra mifandraika amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo amin'ny vaovao.
Ity lahatsoratra ity dia nohamarinin'i Belen Febres-Cordero .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/04/120535/
 Reframed Stories : https://rising.globalvoices.org/reframed-stories/
 Konfederasion'ny Zom-pirenena Tompotany ao Ekoadaoro (CONAIE): https://conaie.org/
 jereo amin'ny sary lehibe kokoa: https://rising.globalvoices.org/files/2018/05/indigenanube.png
 herisetra nitranga tamin'ny Desambra 2016: https://intercontinentalcry.org/ecuadors-standing-rock/
 iraisam-pirenena : http://amazonwatch.org/work/sarayaku
 anisan'ny zava-dehibe tamin'ity tolona ity ny fandefasan-kafatry ny olona: https://newsframes.globalvoices.org/2017/07/22/in-the-depths-of-the-ecuadorian-amazon-digital-communications-aid-the-process-of-self-determination/